पुनःनिर्माणको दुर्इ वर्षः प्रगती के त ? – Halkaro
पुनःनिर्माणको दुर्इ वर्षः प्रगती के त ?
काठमाडौँ । विनाशकारी भूकम्प गएको दुई वर्षको अवधिमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य भने लक्ष्यको आधा पनि सुरु हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत परिवर्तन गरी काम सुरु गरेको भए पनि पुनर्निर्माणको काम भने सुस्त गतिमा मात्रै अगाडि बढेको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा जम्मा ४० प्रतिशत मात्र निजी आवासको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । बाँकी ६० प्रतिशत निजी घरहरूको पुनर्निर्माण कहिले हुने अझै अत्तोपत्तो छैन । व्यक्तिका घर निर्माणमा सरकारले अनुदानको विषय उठान गर्नाले पनि पीडितले अनुदानका आशामा घर निर्माणमा तदारुकता देखाएको पाइँदैन ।
१८ हजार ६ सय ३३ निजी घर निर्माण
९० पुरातात्विक क्षेत्रको पुनर्निर्माण
२ सय स्वास्थ्य संस्था निर्माण
८ हजार विद्यालयमध्ये १ हजार १ सय ४१ निर्माण
४ सय ५० जोखिमयुक्त बस्तीमध्ये १ सय ११ बस्ती स्थानान्तरण सिफारिस मात्र
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा प्राधिकरण धेरै पछि परेको स्वीकार गरेका छन् । पछिल्लो समयमा केही काम भएको बताउँदै उनले अहिलेकै गतिमा काम भए अन्य क्षेत्रमा भने लक्ष्य प्राप्ति हुने दाबी गरे । तीव्र गतिमा काम गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि सरकारी प्रक्रिया, सम्बद्ध अन्य निकायको ढिलासुस्ती, दाताहरूसँगको समन्वय प्रक्रिया आदिले काममा ढिलाइ भएको उनको भोगाइ छ ।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६ लाख २६ हजार ६ सय ९५ लाभग्राहीमध्ये ४९ हजार ६ सय ८१ घरको पुनर्निर्माण सुरु भएको उल्लेख छ । लाभग्राही आफैंले १८ हजार ६ सय ३३ वटा घर पुनर्निर्माण गरेका छन् । पूर्ण रूपमा क्षति भएका ४ सय ४० स्वास्थ्य संस्थामध्ये २ सयवटा मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित बाँकी १७ जिल्लामा ९० हजार ५ सय ५६ लाभग्राही पहिचान भएका छन् ।
प्राधिकरणका सचिव डा. सञ्जय शर्माले पुनर्निर्माणको काम आफैंमा चुनौतीपूर्ण भएकाले यसले अपेक्षाकृत रूपमा गति लिन नसकेको बताए । काम गर्दा सानातिना गल्ती हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले गल्तीबाट नै काम सिक्दै जाने हुनाले प्राधिकरणले त्यही गरिरहेको उल्लेख गरे । पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायको सहयोग खर्च हुने र उनीहरूसँग भएका सर्तहरू ससर्त पालना गर्नुपर्ने भएकाले पनि यो कार्यमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न ढिलाइ भइरहेको उनको तर्क छ ।
हालसम्म निजीतर्फ १७ जिल्लाका ९० हजार ५ सय ५६ लाभग्राही पहिचान भएका छन् । त्यस्तै, पुराताŒिवक महŒवको क्षेत्रतर्फ ७ सय ५० पुराताŒिवक महŒवका वस्तुको क्षति भएकोमा ९० को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको, विद्यालय भवनतर्फ ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा १ हजार १ सय ४१ वटाको सम्पन्न भएको र स्वास्थ्य संस्थातर्फ ९ सयको क्षति भएकोमा २ सयको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै, स्थानान्तरणका लागि ४ सय ५० वटा जोखिमयुक्त बस्तीहरू पहिचान गरी गरिएको भए पनि हालसम्म १ सय ११ बस्ती स्थानान्तरणका लागि सिफारिस भएका छन् । बस्ती स्थानान्तरणको काम हुनै सकेको छैन ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले प्राधिकरणको हालसम्मका प्रगति तथा आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराए । उनले निजी आवास अनुदान वितरण, पुराताŒिवक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, विद्यालय तथा सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण, खानेपानी आयोजना, सुरक्षा निकायका भवन, सडकको मर्मत–सम्भार, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण, तालिम, क्षेत्रगत रूपमा बजेटको अख्तियारी र अवको योजनालगायतका विषयमा जानकारी दिँदै पुनर्निर्माणको क्रमले अब गति लिने बताए ।
← कनिको छरेझैँ अनुदान छरियो अझै एउटा घर पनि बनेन
दोस्रो चरणको निर्वाचनको यस्तो छ तालिकाः चार प्रदेशमा अाचारसंहिता स्थगित →